Onodu unwu ala na Spain di egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọnọdụ ọkọchị na Spain na-emenye ụjọ
Ka ndị mmadụ na-ekwu okwu kwa ụbọchị, ụkọ mmiri na Spain dị oke njọ. Ihe ndekọ dị na ọkwa mmiri dị n'okpuru ala na Ha adịtụbeghị ala karịa kemgbe 1990. Na mmalite nke afọ mmiri a, mmiri a na-ekpokọta nke ọdọ mmiri agbanweela na izu ndị na-adịbeghị anya, n'agbanyeghị mmiri ozuzo.
Kedu ọnọdụ anyị nọ na ya?
Uzo nke mmiri gbakọtara na ọdọ mmiri agbanwebeghị ogologo oge, n'agbanyeghị mmiri ozuzo. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ntakịrị mmiri ozuzo na-eri n’otu ụbọchị. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu ejirila naanị 0,1% mụbaa, nke na-esiri ike na ya ruo nchikota nke izu gara aga (36,5%). A na-anakọta data ndị a site na ọnụ ọgụgụ sitere na Ministry of the Environment.
Dị ka ọ dị, a na-emechi mmiri ndị a na-echekwa mmiri. Nke a bụ izizi kemgbe ọnwa Mee na mmiri anaghị arịda. Mana nke a egosighi mmelite, ebe ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ bawanye.
N'ihi ya, na-akwakọba larịị mmiri guzo na 20.475 cubic hectometres (hm3) site na mmụba nke hectometres cubic 29 na otu izu nke mmiri ozuzo emetụtawo ala ala nke mkpọda Atlantic, nke kachasị na Santiago de Compostela, ebe anakọtara lita 140 kwa mita anọ.
Efere ndị nwere ọnọdụ ọjọọ karịa, na-eru oke ha ọ bụ nke Segura, na 13,7%, na Júcar na 25%. Ha abụọ edebanyela obere mmụba n'izu gara aga. Ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ gaa n'ihu otu a, a ga-eri ya na ụbọchị ole na ole.
Ya mere na ị nwere ike nweta echiche nke mmiri na-dammed na Spain, ebe a bụ a table ebe ngụkọta ikike ke cubic hectometres, ugbu a na pasent nke mmiri dammed na-achịkọta, site hydrographic efere:
Ọnọdụ dị na Spain dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Ọnọdụ ọkọchị na Spain na-emenye ụjọ
Oké ọkọchị na-emetụta ụmụaka 120.000 na Mauritania